Fursaddii Dahabiga ahayd ee ka dhuntay Soomaaliya! - Awdinle Online
Maxay ka dhigan tahay abaalmarinta Nobel Peace Prize (Oslo, Norway) ee Ra’iisal Wasaaraha Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed ku guulaystay?
Ra’iisal Wasaare Dr. Abiya Ahmed wuxuu talada Jamhuuriyadda Demuquraadiga Federaalka ee Ethiopia hogaankeeda qabtay 2, Abriil 2018.Ethiopia waxaa lagu tiriyaa inay tahay dalka labaad ee ugu tirada badan qaaradda Afrika dadkeedana lagu qiyaaso 98.9 milyan. Ethiopia waa dal dadkiisu ka soo kala jeedaan ugu yaraan lix iyo toban (16) qowmiyadood oo Soomaalidu ku jirto. kuna kala duwan diinta, luqadda, iyo dhaqanka. Waa hogaamiyihii afaraad (4) ee Ethiopiyada cusub wuxuuna hogaanka dalkiisa qabtay iyadoo lagu jiro kasoo kabasho burburkii dowladeed ee hogaanka wadanka uu hayey Mengistu Haile Mariam kaasoo saameeyay naf iyo hantiba.
In kastoo maqsadka qormadan aysan ahayn sababaha uu Dr. Abiy Ahmed, Ra’iisal Wasaaraha Ethiopia ku mutaystay abaalmarinta caalamiga Nobel Peace Prize ee 2019 misana waxaa baraha bulshada hareeyayfursaddii dahabiga ahayd ee ka dhuntay Soomaaliya tan iyo xiligii la doortay Madaxwaynaha Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ee 8da Febraayo, 2017. Inta aynu fursadahaas guda galin bal aan sababaha guusha Dr. Abiy Ahmed wax ka iraahdo.
Fahamka siyaasadaha is diidan ee wadamada dhaca bariga Afrika waliba wadamada colaadaha soo jireenka ahi kala dhexeeyeen sida Eritrea iyo Soomaaliya.
Si la mid ah, wuxuu durbadiiba u tafa xaytay heshiisiinta wadama Suudaanta Koonfureed iyo Midda Wuqooyi.
Wuxuu isku howlay wada hadalsiinta Eritrea iyo Djibouti oo uu ka dhexeeo muran dhanka xuduuda ah.
Wuxuu isku howlay xal u raadinta khilaafaadka baddda ee Kenya iyo Soomaaliya.
Wuxuu la heshiiyay ururkii hubaysnaa Oromo Liberation Front.
Wuxuu la heshiiyay ururadii hubaysnaa sida Ogaden National Liberation Front (ONLF)
Wuxuu xabsiyada ka sii daayay siyaasiyiin iyo askar ka tirsanayd labadaas urur.
Wuxuu sidoo kale xabsiga ka sii daayay saraakiil sar-sare oo ka tirsanayd qowmiyadda Amharada sida Brigadier General Asaminew Tsige oo horay ugu xukunnaa xabsi daa’in.
Hal abuurka suuq dhaqaale oo ka dhexeeya wadamada bariga geeska Africa si wadankiisu u helo dekado ay daddkiisu wax ka dhoofiyaan ama wax kala soo dagaan
Wuxuu ka qayb galay shirar caalami ah iyo kuwo Afrika ah oo uu ugu baaqay nabad iyo horumar.
Dhowrista Dastuurka dalka, dhamaystirkiisa iyo afti u qaadidiisa oo aan wax la taaban karo ka qabsoomin.
Dhisidda ciidan leh astaan qaran sugi karana xuduuda dalka ee dhul, cir, iyo badba leh. Wali ciidamada Soomaaliyeed waxay ku kala firirsan yihiin dowlad goboleedyada.
La dagaalanka musuq-maasuqa si loo xoojiyo hay’adaha dowliga ee heer federaal iyo mid dowlad goboleed. Waxaad ogtihiin xogtii dhawaan ku saabsanayd musuq-maasuq ku baahay hay’adaha dowladda dhexe oo uu sii daayay madaxa hanti-dhowrka qaranka Soomaaliya.
Sugidda amniga iyo soo afjarka qolyaha nabad diidka ah. Waxaan ognahay tiradii ugu badnayd ee ku dhinta qaraxyada al-shabaab inay dhaceen wixii ka danbeeyay Octobar 2017.
Tirikoobka dadka iyo disid xisbiyo siyaasadeed si loo gaaro doorasho qof iyo cod ah. Wax tirakooba ah lama samayn wallow ay ururu siyaasadeed is deewaan galiyeen balse aysan wali u gudbin xisbiyo qaran.
Xoojinta hay’ada dowliga ee federaalka si wadanku ugu laaban colaadihii sokeeye iyo marxaladihii laga soo gudbay. Durba waxaa muuqda kala shaki ku baahay dhamaan dowlad goboleedyada oo tilmaamaya in dhaqanka dowladda dhexe u muuqdo kii ciidamada hogaaminayeen sanadihii 1969-1991 oo dadka lagu horjoogay qori caaradii.
Xoojinta siyaasadda arimaha dibadda. Waxaa aad u muuqda jahwareerka siyaasadeed ee dowladda dhexe ka haysta isku miisaamidda siyaasadaha is diidan ee ka dhaxeeya wadamada qaar khaasatan kuwa Khaliijka.
Kobcinta maamul goboleedyada wadanka ka jira khaasatan dhanka dhaqaalaha iyo maamulka. Waxaad ogtihiin cunaqabataynta lagu hayo maamul goboleedyada qaar khaasatan Galmudug iyo Jubaland.
Dar-dar galinta wadahadalada Somaliland si loo ilaaliyo wadajirta Soomaaliya. Ku dhawaad sadex sano oo kooxda N&N xuskunka haystay waxay ku guul daraysatay dib u bilaabidda wadahadii xukuumadda federaalka iyo Somaliland.
Ku heshiinta qaybsiga khayraadka iyo deeqaha dalka si loo dhowro wadajirka wadanka. Ka dhib shirkii khayraadka dalka ee lagu qabtay Baydhao ee 2018, waxaa la ogtahay in dowladda dhexe ka gaabisay meel marintiisa. Dhaqaalihii wadankana loo adeegsaday kala furfuridda dowlad goboleedyada.
Previous articleMooshin Ka Dhan Ah Ciidamada Kenya Ee Jooga Soomaaliya Oo La Wado
Next articleShil diyaaraded oo ka dhacay dalka Itoobiya